Inona no atao hoe tadio sy ahoana ny fomba hitrangany | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | | Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro
Tafio-drivotra no oram-panala, ranomandry na havandra miaraka amin'ny hamafin'ny hery miteraka mazàna any amin'ny faritra be tendrombohitra. Mampidi-doza tokoa izy ireo ary nandritra ny tantara dia niteraka loza maromaro tany amin'ny tanàna lehibe sasany. Izy ireo koa dia nahatonga ny fahafatesan'ireo mpihanika tendrombohitra sy mpihanika tendrombohitra maro.
Raha te hahalala ny mampiavaka ny tadion-drivotra sy ny endrika niforonany ianao dia tohizo ny famakiana 🙂
1 Endri-javatra amin'ny ranomandry
2 Inona no mahatonga ny ranomandry?
4 Ny tadion-dranomandry eny an-tendrombohitra
4.2 Very fahitana
4.4 very hevitra avy
4.5 Enta-mavesatra ara-tsaina
Endri-javatra amin'ny ranomandry
Blizzards dia fantatra koa amin'ny hoe oram-panala, oram-panala na rivotra fotsy. Rehefa mitranga ny oram-baratra dia matetika ambany ny 0 degre ny mari-pana. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy ireo ary mahatonga azy ireo hampidi-doza kokoa dia ny rivotra mahery. Ho an'ireo miakatra an-tendrombohitra dia mety atahorana ho faty izy ireo, satria manahirana tokoa ny fahitana azy ireo ary ambany dia ambany ny mari-pana.
Mandritra ny tadion-drivotra, noho ny rivotra mahery, dia afaka mahatsapa hafanana hatramin'ny -20 degre ianao. Ny rivotra dia azo tohanana sy mahery ary ho tonga amin'ny hafainganam-pandeha 56 km / ora na avo kokoa. Amin'ny ankapobeny, maharitra mandritra ny 3 ora ny tadion-drivotra ary mihena hatramin'ny antsasaky ny kilometatra ny fahitana.
Inona no mahatonga ny ranomandry?
Saika ny toerana rehetra izay mety hianjadian'ny oram-panala ny oram-panala matetika. Tsy dia mahazatra loatra izany fa amin'ny faritra polar, faritra akaiky azy na tendrombohitra avo. Androany, ireo faritra izay matetika no anoratana ny tadion-tsetroka dia, ohatra, ao amin'ny Etazonia sy avaratr'i Arizona. Amin'ireto toerana ireto dia misy rafitra tsindry ambany izay mianavaratra ary raha mipoitra amin'ny alàlan'ny Great Basin ny rafi-tsindry avo dia hitranga ny tadio.
Matetika ny blizzards dia mivoatra amin'ny ilany avaratra andrefan'ny rafitra tafiotra mahery. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny tsindry avo sy ambany dia ny mahatonga ny rivotra mahery. Tsaroantsika fa ny rivotra dia miteraka amin'ny alàlan'ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry eo amin'ny teboka iray sy iray hafa. Arakaraka ny maha-hafa azy ny tsindry avy amin'ny habakabaka dia hihamafy ny rivotra.
Etsy ankilany, ny rano mijanona mangatsiaka amin'ny habakabaka dia mamorona kristaly mifikitra amin'ny hafa. Rehefa miray ny kristaly ranomandry dia miforona snowflakes hatramin'ny isa enina. Ary koa, rehefa milatsaka ny lanezy ary mahery ny rivotra, dia tapaka roa ny fahitana.
Raha fintinina dia azonao atao ny milaza fa ny tafio-drivotra dia fitambaran'ny orampanala sy rivotra.
Mazava ho azy fa mampidi-doza ny tadion-drivotra miankina amin'ny toerana misy anao. Raha ao an-trano ianao dia ho voaro. Fa raha mahagaga anao any andafy izany dia hitera-doza. Raha tsy miaro anao ianao, ny hatsiaka dia mety hiteraka hypothermia ary, noho izany, ny fahafatesana.
Raha miditra ao anaty fiara ianao, dia tsy ho tanteraka mihitsy ny fivezivezena. Ny fahitana dia mihena ho 0,40 kilometatra ary rivotra mifofofofo no mamely ny fiara. Mety hiteraka fikorontanan-tsaina ilay mpamily ary hiafara amin'ny lozam-pifamoivoizana.
Rehefa tena mahery vaika ny tadion-drivotra dia mahavita miteraka tsy fahombiazana amin'ny fizaran-tany elektrika ary miteraka fahatapahana. Mitranga izany satria manimba ny tariby ny rivo-mahery sy ny lanezy be.
Ny tadion-dranomandry eny an-tendrombohitra
Hanokana fizarana iray manontolo izahay hamaritana ny toe-javatra rehetra misy ny tadion-dranomandry any an-tendrombohitra. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, maro ny mpihanika tendrombohitra, mpihanangy ary mpihanika no maty tamin'izy ireo. Rehefa mari-pana nivadika ambany -15 degre izy ireo ary nihena ny fahitana, lasa mampidi-doza be ny toe-javatra.
Rehefa any an-tendrombohitra avo ianao, ny rivotra dia mamely ny vatanao amin'ny alàlan'ny sakana tsy toa an'ireo tanàna. Ataovy ao an-tsaina fa any an-tanàna isika dia manana tranobe manapaka ny rivotra. Ankoatr'izay, ao an-tendrombohitra dia misy singa marobe izay tsy miraikitra amin'ny tany ary afaka mamely antsika. Ohatra, ireo voamadinika misy ranomandry miforona, rantsana kely ary vato izay entin'ny rivotra.
Rehefa miakatra an-tendrombohitra ny mpitsangatsangana ary gaga amin'ny tadio, dia misy ny vokany manelingelina ny dia.
Ny zavatra voalohany tsapanao rehefa miakatra tendrombohitra ianao ary gaga amin'ny tadio: ny euphoria. Afaka mahatsapa ho voatosika hihetsika isika manoloana ireo zava-tsarotra aterak'izany. Afaka mamorona izany andao tsy ho hitantsika tsara ny mampidi-doza amin'ny toe-javatra.
Raha amin'ny fotoana hianikaantsika ny tendrombohitra fa tsy manao solomaso miaro isika, dia mety hamely antsika ireo fitaovana voalaza etsy ambony. Raha mahavoa ny masontsika izany dia mety hiteraka olana lehibe.
Any an-tendrombohitra dia misy toerana tery kokoa izay mitana andraikitra lehibe ny mandanjalanja. Ny rivotra mahery vokatry ny tadio-drivotra dia mety hahatonga antsika tsy mandanjalanja sy hianjera. Ary koa, raha misy fiatraikany eo amin'ny tarehintsika sy ny masontsika izany dia vao maika tsy manam-paharetana sy tsy mifantoka intsony isika. Mety hitarika antsika hanao fahadisoana izany. Ampirisihina mafy ny tsy hitodihanao amin'ny rivotra mba tsy haharesy antsika ny kitapony noho ny lanjany.
very hevitra avy
Miaraka amin'ny fahafinaretana tsapantsika tany am-piandohana sy ny tsy fahampian'ny fahitana dia manangana fahatokisana izahay. Izany dia satria eo alohanay manana fanamby handresena. Na izany aza, ny tsy fahitana tsara dia very ny hevitra manokana. Azonao atao ny mino fa mandeha amin'ny làlana tsara ianao ary diso. Ny fihenan'ny fahitana dia mahatonga antsika tsy hanana referansa ary, amin'ny fotoana maharitra, latsaka anaty ambaratongan'ny demoralisation.
Raha ao anaty rivo-mahery isika, ny fihetsika ananantsika amin'izao fotoana izao dia voatery hialana amin'izany. Mety hamitaka antsika ny fotoana. Afaka mieritreritra isika fa minitra maromaro dia mety ho lasa ora. Amin'ity toe-javatra ity dia mila manana finiavana mafy ianao.
Miaraka amin'ny maripana ambany sy ny tadin'ny rivotra, hypothermia dia mipoitra ao anatin'ny fotoana fohy. Toa tsy mafana ny akanjo, na dia manana sosona an'arivony aza isika. Raha tratry ny hatsiaka isika, dia hampihena ny maripanan'izy ireo amin'ny ambaratonga mampidi-doza ny vatantsika. Raha tsy manara-penitra ny fitaovana na mando hatsembohana ianao, dia ho haingana kokoa ny fihenan'ny hafanana.
Alohan'ny oram-baratra any an-tendrombohitra, ny fanapahan-kevitra tsara indrindra dia ny hidina. Na aiza na aiza hidinanao, raha mbola mihena ny haavon'ny toerana dia mihena ny loza.
Amin'ity fampahalalana ity dia ho vonona kokoa ianao hiatrika tadio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Fisehoan-javatra amin'ny toetr'andro » Inona no atao hoe tadio - ary ahoana no hisehoany
Inona izany, ny fomba famolavolana azy sy ny toetran'ny glacier